Ethnic House ulwandle & iimbono ezintabeni - I-Airbnb
Ethnic House ulwandle & iimbono ezintabeni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguVictor
Indlu ye-Eco inegumbi lokulala eliyi-1 kunye neveranda yamaplanga, kunye nekhitshi kunye negumbi lokuhlambela, iindawo ezivulekileyo kwiimitha ezingama-2200 apho unokugcakamela khona ilanga, ufunde, ungenise ubumdaka kwii-hammock phakathi kwemithi kunye nokutya isidlo sangokuhlwa sabathandanayo.
Le ndlu inegumbi lokulala eliyi-1 kunye neveranda yamaplanga, ikhitshi negumbi lokuhlambela, emaphandleni; unokonwabela ubuhle beentaba kunye noLwandle lweMeditera. Ikhitshi negumbi lokuhlambela lahlukile kwindlu yamaplanga
Unokutyelela iidolophu zaseDenia, iJavea, iMoraira, iAltea, kunye nolwandle lwayo, iindlela zokunyuka intaba, ukudayiva kumalwandle acwengileyo, ukuhamba ngesikhephe kunye nebhayisekile yasezintabeni okanye ukuhamba ngeenyawo.
Bona ukutya kwaseMedithera kunye neetapas phakathi edolophini uze wonwabele ukutshona kwelanga kwiibhari zamalwandle.
Kukho amayeza, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iibhari kunye neenkonzo zonyango eziya kwiikhilomitha eziyi-3. Ibala legalufu eliyi-14 km, elona lwandle likufutshane likumgama weekhilomitha eziyi-16.
Ukunyuka intaba iimitha eziyi-150 ukusuka endlwini.
Kufuphi, iAlicante okanye isikhululo seenqwelo-moya iValencia malunga ne-100km.
Le ndlu inezinto zokupheka nazo zonke izinto ezifunekayo ukuze kuphekwe.
Jonga imali eyongezelelekileyo yezilwanyana zasekhaya
Le ndlu ayikonakalisi indalo. Ibonelela ngamandla elanga, inokutshaja kuphela iifowuni, iikhamera kunye neethabhlethi, kwaye icime izibane xa zingadingeki
Ixesha lokungena liphakathi ko-16.00 no-20.00. (C 'est possible faire flexible )
Ixesha lokuphuma lenziwa ngaphambi kwe-11.00 h.
KUBALULEKILE : Ndifuna ikopi yePaspoti yakho okanye yekhadi lesazisi, Ungathumela nge-imeyile ngaphambi kokuba ufike endlini
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cumbres de Alcalali